Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao momba ny Hotely sy Resort » Boky sy fitsangatsanganana miaraka amin'ny fahatokisan-tena ao amin'ny Sandals Resorts
Antigua & Barbuda Breaking News • Vaovao Mafana Bahamas • Vaovao Mafana Barbados • Vaovao Mafana Grenada • Vaovao Mafana • Vaovao Mafana Jamaika • Famakiana Vaovao Saint Lucia • Karaiba • Hospitality Industry • Hotels & Resorts • Vaovao lafo vidy • Vaovao • Resorts • Tantaram-pitiavana tantaram-pitiavana tantaram-pitiavana • Tourism • Fifanarahana Travel | Torohevitra momba ny dia • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Vaovao isan-karazany
Jolay 21, 2021
Sandals Resorts - fialantsasatra tsy misy ahiahy
Na efa nanofa fijanonana any amin'ny iray amin'ireo Sandals Resorts mahafinaritra ireo vahiny na raha toa ka ho eritreretin'ny mpivezivezy fotsiny izao dia ao Sandals ny fialantsasatra dia fialan-tsasatra tsy misy ahiahy.
Sandals Resorts dia manasongadina fomba fanao sy politika faran'izay tsara natao hampiorina ny sain'ny vahiny.
Na famandrihana efa misy io na ho vita tsy ho ela dia afaka matoky ny mpitsidika fa voasaron'ny Sandals izy ireo.
Manomboka amin'ny fiantohana amin'ny fitsangatsanganana mankany amin'ny fanafoanana ny efitrano malalaka ka hatramin'ny fahadiovana ary bebe kokoa, Sandals dia nieritreritra ny lafiny rehetra amin'ny fialantsasatra tsy misy fihenjanana.
Fiantohana ny fiarovana ny dia eto amintsika!
Ny manampy amin'ny fiarovana ny zavatra ilainao no laharam-pahamehana! Mampahafantatra ny vaovao Drafitra fiarovana ny dia. Ianao sy ireo olon-tianao dia afaka miaina ny paradisa amin'ny fahalalana ny famandrihana rehetra natao hatramin'ny 31 aogositra 2021 ho an'ny dia hatramin'ny 31 desambra 2022 dia hahazo fiantohana ho azy manokana ho an'ny fandaniana ara-pitsaboana mandritra ny fijanonanao any amin'ny toeram-pialan-tsasatra ary misy koa tombontsoa maro rehefa tsy eo ianao. Ny tsara indrindra dia eto amintsika izy io, novidiana tamin'ny anaranao sy ampahany amin'ny famandrihanao Sandals.
Fanafoanana ny efitrano maimaim-poana ary ahazoana vola 100%
Ny fanafoanana ny efitrano maimaim-poana ho an'ny famandrihana dia nofoanana 31 andro na mihoatra talohan'ny datin'ny fisidinana (ankoatry ny Over-The-Water Suites). Io dia mihatra amin'ny faritry ny tany / efitrano famandrihana ihany. Ny fanafoanana ny sidina dia iharan'ny sazy sy fameperana ataon'ireo mpitatitra fiaramanidina.
Platinum Protocol Of Cleanness
Fomba fiasa fanampiny sy fenitra momba ny fahadiovana azo antoka azo antoka nampitombo ny fepetra fiarovana sy fiarovana ho an'ny vahiny mitady filaminan'ny saina any Karaiba.
US / Canada Famerenana fidirana takiana COVID-19 fitadiavana maimaimpoana amin'ny fialan-tsasatra
Ny fiainganana rehetra any Etazonia sy Kanada dia takiana amin'ny fanadinana COVID-19 raha hiditra indray. Mba hahazoana antoka fa fanelingelenana kely dia kely amin'ny fialan-tsasatrao ity, nandamina ny fahafahanay hanana fitsapana antigen COVID-19 maimaimpoana ho an'ny mponina amerikanina sy fanandramana PCR ho an'ny mponina kanadianina ao anaty fampiononana ao amin'ny toeram-pialan-tsasatra misy anao izahay. Ny fitsapana dia hotarihin'ireo mpitsabo ara-pitsaboana ankasitrahana sy manao fanazaran-tena faran'izay betsaka ary tsy dia manelingelina kely ny fiainanao amin'ny fialan-tsasatra ankapobeny. Izany dia hatao ao anatin'ny 72 ora alohan'ny hiainganao ary ho hita ao anatin'ny 24-48 ora ny valin'ny andranao.
COVID-19 Lockdown dia nitarina tsy voafetra tao ...
Africa COVID-19 Maty tampoka ny olona maty
Manana andraikitra lehibe kokoa amin'ny Internet ny Internet amin'ny zavatra ...
Mety takiana amin'ny seranam-piaramanidina amerikana ny famerenam-bola ho an'ny ...
Ny Forum momba ny fizahan-tany manerantany dia mandre ny filàna fahitana ...
COVID Prank Ao amin'ny mpamaky bilaogy horonantsary ambanin'ny tany any Mosko ao ...
Fizahan-kiraro mitondra lohateny fitaterana antoka miaraka amin'ny antoka amin'ny fialantsasatra
Fizahantany Karaiba 2021: Gut Punched
Rivo-doza Henry tamin'ny fianjerana niaraka tamin'i New York
Karnavaly hiasa amin'ny 75% -n'ny Fleet Capacity amin'ny faran'ny ...
Miaraka amin'ny tranga COVID vaovao maherin'ny 40,000 ao anatin'ny 2 andro India dia manontany ...
Ny fahaverezan'ny satan'ny lova maneran-tany dia hampiato an'i Liverpool ...